Nagu saabsan - Uk Prudential Industry Co., Ltd.
Boqortooyada Midowday UK Warshadaha CO., XADDIDAN
UK Prudental Industry group oo ku taal Wales, waa shirkad erey caan ah oo leh sannado badan taariikh '. Hadafkeenu waa inaan raacno hal-abuurnimo iyo ku-dhaqan. Alaabtayada waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa dhismayaasha dadweynaha ee magaalooyinka, dhismooyinka ganacsiga iyo kuwa kale. Wax soosaaradeena cusub iyo kuwa kala duwan waxay la kulmi karaan nashqadeeyayaasha si ay u xalliyaan wax kasta oo xalal hal abuur leh si ay u fasiraan macnaha qotada dheer ee dhismaha iyo inay siiyaan fursado aan dhammaad lahayn oo naqshad iyo hal-abuurnimo ah. Waa qaabkeenna horumarinta ganacsiga in si adag loo hirgeliyo hufnaan u janjeedha, tayo u jihaysan iyo maamul bini-aadamnimo u janjeedha. Iyada oo qayb ka ah bulshada, waxaan si fiican uga warqabnaa hareeraheena booskeena iyo masuuliyadeena.
Waxaan u dhaqmeynaa si waafaqsan masuuliyadan waxaanan hubineynaa inaan la wadaagno qiimaha aan abuurnay, isku dheelitirka saxda ah, macaamiisheenna, shaqaalaheenna iyo dhammaan saamileydayada. Maalmahan waxaan si adag uga shaqeyneynaa sidii aan u abuuri lahayn qiimo waara oo lala yeesho wada-hawlgalayaashayada Shiinaha ee lagu kalsoonaan karo iyo khibrad leh Kooxda 'Prudential Group' waxay leedahay noocyo kala duwan oo ah 100 shey oo asaasi ah oo si joogto ah u cusbooneysiinaya. Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato alaabteenna, xuduudaha tiknoolajiyada oo faahfaahsan iyo adeeggayaga. Injineeradayada khibrada leh ee iibka ayaa jooga adeegaaga wakhti kasta.
Waxaan ku takhasusay barroosinka dhismaha iyo nidaamka xoojinta, iyo rinjiga aan dabiici ahayn.
Waxaan Caawineynaa Macaamiisha Inay guuleystaan
Shirkadda 'Prudential Company' iyo la-hawlgalayaasha Shiinaha ayaa qorey cutub iskaashi ah oo ka imanaya hawlgelinta qaybo ka mid ah illaa si buuxda ugu hawlan soo saarista nidaamka dhismaha madaniga ah ee 'Prudential' iyo kanaalka gundhigga ah. Maanta, in ka badan 3,000 mashruucyada dhammaadka sare ayaa adeegsada qaybo iyo
shirar lagu soo saaray Shiinaha. Mustaqbalka, Prudential wuxuu sii wadi doonaa la shaqeynta warshadaha waxsoosaarka tayada ku habboon ee Shiinaha si loo dhiso nidaam isku dheelitiran oo hufan oo tayo sare leh iyo kanaalka 'Cast-in anchor channel'. Iskaashigan ayaa laga yaabaa inuu dhaafo waqti iyo boos isla markaana uu mustaqbalka ka horkeeno ballanqaadkeenna weligiis ah.
UK Prudential Industry Co., Ltd. waa shirkad caan ka ah aduunka oo ingiriiska ah. UK Prudential Industry Co., Ltd. u fidiyaan wax soo saar iyo adeeg in ka badan 40 dal oo adduunka ah. Waxay ka shaqeysaa oo ay maamushaa ganacsiga in ka badan 15 dal, iyada oo ka dhiseysa wershado iskaashi wadashaqeyn 6 dal ah isla markaana leh sheybaarro 4 dal.
Shirkadda Prudential waxay siisaa injineerada adduunka oo dhan adeeg farsamo oo ballaaran. Si lagaaga caawiyo inaad dooratid qaybaha dhejiska ku habboon, shirkadeena ayaa si dhow ula shaqeyn doonta kooxdaada injineernimada sharafta leh marxaladda ugu horreysa ee naqshadeynta mashruuca. Iyada oo loo marayo kaqeybqaadashada firfircoon, Prudential marwalba waxay kaa caawin kartaa inaad doorato qaybo gogol xaaraya oo ammaan iyo dhaqaaleba leh. Kooxda injineernimada Prudential ayaa kuugu adeegi doonta si daacadnimo iyo xamaasad weyn leh xafiiska ama goobta mashruuca. Prudential waxay gacan buuxda ka geysan doontaa mashruuc kasta oo idinka mid ah.
Kooxda Saadka Caalamiga
Adeegga Kooxda Saadka Caalamiga ee Prudential si loo hubiyo in alaabadaada la geyn doono goobta dhismaha waqtigeeda. Waxaan higsaneynaa inaan kaa caawino inaad ku guuleysato howlaha sida ku xusan jadwalkaaga daahitaan la'aan. Xitaa haddii xaalad degdeg ahi dhacdo, waxaan isla markiiba ka wareejin doonnaa alaabteenna
bakhaarka ugu dhow ee maxalliga, gobolka, ama xitaa adduunka. Dhanka kale, waxaan sidoo kale dadaal uga hari doonin inaan iska ilaalino rarka qaaliga ah ama khidmadaha duulimaadyada.
Marka laga reebo alaabtayada caadiga ah, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga habeynta wax soo saarka si aan kuugu soo bandhigno alaabooyin qeexitaano kala duwan ah.
Fadlan si xor ah ula xiriir wakiilka maxalliga ah ee loogu talagalay 'Prudential', haddii aad wax baahi u qabtid.
Ilaalinta Deegaanka ee Feejignaanta leh
In kasta oo la fududeynayo hal-abuurka, Prudential wuxuu si firfircoon ugu dhiirrigeliyaa shaqaalaha inay qayb ka qaataan qorshaheeda aasaasiga ah ee ilaalinta deegaanka, oo ah "Mashaariicda Kahortagga Wasakhda"